मेस्सी र रोनाल्डो मात्रै होईन यी ६ महान् अभागी फूटबलर जसले पनि कहिल्यै जित्न सकेन विश्वकपको ट्रोफी !
काठमाडौँ । रसिया विश्वकप २०१८ लाई अप्रत्याशित परिणामहरुले भरिएको विश्वकप भन्दा कुनै पनि संदेह मान्नु पर्दैन। विश्वकपको सुरुवातमै साविक विजेता टोली जर्मनी आउट हुनु र नकाउट चरणको सुरुवातमै अर्जेन्टिना, पोर्चुगल र स्पेन जस्ता टोलीहरु घर फर्कनु पनि एउटा अप्रत्यासित नतिजाको उदाहरणहरु हुन्। हुन त क्वाटर फाइनलबाट पुन उरुग्वे र ब्राजिल जस्ता दाबेदार टोलीहरु पनि आउट भैसकेको अवस्था छ।
यसको साथ साथै यी टिमहरुसँग जोडिएका विश्व चर्चित महान् खलाडीहरुको एक पटक विश्वकपको ट्रोफी चुम्ने सपना पनि अधुरै रहेको छ। लियोनल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डो जस्ता विश्व चर्चित महान् खेलाडीहरुले अहिले सम्म आफ्नो देशको जर्सी लगाएर विश्वकपको ट्रोफी आफ्नै हातले उचाल्न पाएका छैनन्।
तथापि, यी दुई महान खेलाडीहरुले चार पटक सम्म विश्वकप खेलिसकेका छन्। तर, दुबै खेलाडीले यस पटकको विश्वकपमा अन्तिम १६ को खेल भैरहँदा गोल गर्न असमर्थ रहे। अब फेरी अर्को ४ वर्षपछि सन् २०२२ मा हुने विश्वकप सम्म यदि यी दुई खेलाडीले फुटबल खेलिरहे भने अहिलॆ ३१ वर्ष पुगिसकेका मेस्सी र ३३ वर्ष का रोनाल्डो पुन: आफ्नो भाग्य परिक्षणका अवश्य गर्नेछन्।
अहिले जसरी विश्वमा तिब्र गतिमा फुटबलको विकास र विस्तार भैरहेको छ। त्यसैगरी हेरेक साना भनिएका देशले पनि निकै राम्रो गर्दै गैरहेको परिदृश्यमा यी खेलाडीहरुलाई अझैँ ४ वर्षसम्म टिक्न भने पक्कै पनि गाह्रो हुनेछ। यी दुवै खेलाडीहरुले विश्वकप फुटबलमा सर्वश्रेष्ठ फुटबलरको उपाधी जितिसकेका छन् तर आफ्नो देशका लागि भने विश्वकप जिताउन सकेका छैनन्।
तर, यस्तो दुर्भाग्यको शृंखला यी दुई महान् खेलाडीहरुसँग मात्र भने छैन। त्यस्ता थुप्रै महान खेलाडीहरुसँग पनि उनीहरुसँग तितो अनुभव छ जसले आफू विश्वको महान खेलाडी भएर पनि दुर्भाग्यवस आफ्नो पालामा विश्वकप जित्न सकेनन्।
यी हुन् ति अभागी महान् फुटबलर जसले आफ्नो नेतृत्वमा विश्वकप जित्न सकेनन्
१. जोहान क्रूफ (हल्याण्ड )
हल्याण्डका फुटबलर जोहान क्रूफलाई यूरोपको फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट फुटबलर मानिन्छ। सन् १९७४ मा पश्चिमी जर्मनीमा आयोजना भएको विश्वकपमा उनले आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। उनले आफ्नो चतुर फुटबल रणनीतिको बलमै हल्याण्डलाई फाइनल सम्म पुर्याएका थिए।
तर, फाइनलको ऐतिहासिक खेलमा उनको टोली जर्मनीसँग १-२ ले हार्न पुग्यो। क्रूफले विश्वकपमा तीन पटक गोल्डन बल जितेका छन् तर उनले आफ्नो देशका लागि विस्व्काप जिताउन भने सकेनन्।
२. फेरेन्सस पुस्कास (हंगेरी-स्पेन)
फेरेन्सस पुस्कास सदावहार फर्वाड खेलाडीको रुपमा चिनिन्छ। उनले सन् १९५२ को ओलम्पिक खेलमा आफ्नो टोलीलाई स्वर्ण पदक जिताएका थिए। त्यसको २ वर्षपछि १९५४ मा स्विजरल्याण्डमा भएको विश्वकप फुटबलमा उनले आफ्नो टिमलाई फाइनल सम्म पुर्याएका थिए।
उक्त विश्वकपमा उनको टोलीलाई दावेदार पनि मानिएको थियो। तर, बिडम्बना उनीहरुले पश्चिम जर्मनीसँग हार व्यहोर्नु पर्यो। त्यसपछि १९६२ मा पुस्कासले स्पेनको नागरिकता लिए र उक्त वर्ष नै चिलीमा खेलिएको विश्वकपमा भाग समेत लिए तर त्यहाँ पनि उनले विश्वकप जिताउन सकेनन।
३. अल्फ्रेडो डि स्टेफनो (अर्जेन्टिना-स्पेन)
फीफा ने डि स्टेफनो लाई २० औं शताब्दीको सबै भन्दा उत्कृष्ट ५ खेलाडीहरुको सूचिमा स्दमावेष गरेको थियो। उक्त सूचीमा पेले, म्याराडोना, क्रूफ र ब्यकेनबोर शामेल थिए । उत्कृष्ट खेलाडी हुँदा हुँदै पनि डी स्टेफनो कहिल्यै विश्वकप खेल्न पाएनन् ।
पहिले उनले अर्जेन्टिनाको लागि खेलिरहेका थिए। तर, १९५० र १९५४ को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले विश्वकपमा भाग लिएन। त्यसपछि डि स्टेफनोले अर्जेन्टिना छोडेर स्पेनको नागरिकता लिए। तर दुर्भाग्यको कुरा भन्नु पर्छ सन् १९५८ को विश्वकपमा स्पेन क्वालिफाइ समेत हुन् सकेन। त्यसको ४ वर्षपछी चिलीमा भएको विश्वकपमा डि स्टेफनो चोटिल हुन पुगे। जसका कारणले उनले कहिल्यै विश्वकप नै खेल्न पाएनन्।
४ . यूसेबियो (पोर्चुगल)
यूसेबियोको जन्म मोजाम्बिकमा भएको हो। त्यसबेला मोजाम्बिकमा पोर्चुगलले शासन गरेको थियो। यूसेबियोलाई पोर्चुगल फुटबल पहिला महान फुटबलर मान्ने गरिन्छ। सन् १९६५ मा उनी यूरोपको सर्वश्रेष्ठ खिलाडी चुनिएका थिए ।
त्यसको एक वर्षपछि इंग्ल्याण्डमा भएको विश्वकपमा यूसेबियोको उत्कृष्ट खेलको मद्दतले पोर्चुगलले सेमिफाईनल सम्मको यात्रा तय गरेको थियो। तर, सेमिफाईनलमा पोर्चुगलले इंग्ल्याण्डसँग २-१ गोलले हार्न पुग्यो। यो नै पोर्चुगलको अहिले सम्मको विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन हो।
५. जोर्ज बेस्ट (उत्तरी आयरलैंड)
उत्तरी आयरल्यानका यी महान फुटबलरले पनि कहिल्यै विश्वकपमा भाग लिन पाएनन्। यद्यपि उनले डेनिस लसवी बबी चार्ल्टनसँग मिलेर सन् १९६८ को यूरोपियन कपमा आफ्नो टिम मेनचेस्टर यूनाइटेडलाई च्याम्पियन बनाएका थिए।
उक्त यूरोपियन कपमा प्रतियोगितामा जोर्ज बेस्ट यूरोप का सर्वश्रेष्ठ खेलाडी चुनिएका थिए।
६. म्याक्रो बेन बैस्टन( हल्याण्ड)
म्याक्रो बेनले मात्र एउटा विश्वकपमा भाग लिएका थिए। उनी सन् १९९० मा इटालीमा भएको विश्वकपमा खेलेका थिए। यस भन्दा पहिले सन् १९८८ माम्याक्रो बेनले आफ्नो टोलीलाई यूरोपियन च्याम्पीयान्सको उपाधि जिताएका थिए।
वर्ष १९९२ मा उनी विश्वकै सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनिए र उनले तीन पटक गोल्डन बल पनि जिते । तर सन् १९९३ मा जब उनी २८ वर्षका थिए तब उनको खुट्टाको गोलीगाँठामा चोट लाग्यो र उनको फुटबल करियार समाप्त भयो।
यी खेलाडीहरु बाहेक अन्य थप्रै उत्कृष्ट खेलाडीहरु जसले विश्वकप जित्ने अवशर पाएनन्। जसमा पाउलो मेल्डिनी (इटली), लुइस फिगो (पोर्चुगल), जिको (ब्राजील), रोबर्टो बैगियो (इटली) र माइकल प्लेटिनी (फ्रान्स ) पनि रहेका छन् ।
प्रकाशित : शनिबार, असार २३, २०७५१८:५२
२०२२ को विश्वकपमा सहभागी हुने राष्ट्रको संख्या बढाईने: हेर्नुस् कति राष्ट्र सहभागी हुनेछ अबदेखि ?